ओलीलाई महाधिवेशनबाट विदा गर्ने १० भाईको तयारी, बालकोटमा भूकम्प — Imandarmedia.com
काठमाडौ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको आगामी १०औँ महाधिवेशनबाट विदा गर्ने योजना बनेको छ। त्यसका लागि पार्टी विभाजनको विपक्षमा रहेका १० जना स्थायीसमिति सदस्यहरुले गोप्य रणनीति बनाएका छन्।
नेकपा एमालेका दोश्रो पुस्ताका नेताले दिएको जानकारी अनुसार आगामी मंसिर हुने भनिएको १०औँ महाधिवेशन फागुनमा सार्न पर्ने भन्दै लभिङ थालेका छन्। नेकपा एमालेको पहिलो विद्यान महाधिवेशनबाट पारित विद्यान अनुसार ७० बर्ष उमेर पुगेका नेतालाई स्वतः विदा हुने व्यवस्था गरेको छ।
फागुनमा एमाले अध्यक्ष ओली ७० बर्ष पुग्ने भएकोले ओलीको विकल्पका लागि महाधिवेशन सार्न पर्ने उनीहरुको माग छ। विद्यानको त्यही व्यवस्थालाई हेरेर १० भाई नेताले पार्टी महाधिवेशन सार्नपर्ने प्रस्ताव पार्टीका तल्ला कमिटीमा राखेका छन्।
शनिबार देशभर वडा अधिबेशन गर्ने भनेर सर्कुलर गरिसकेको अवस्था उनीहरुले वडा अधिवेशन समेत रोक्न माग गरेका छन ।यही विषयमा एउटै स्टेजमा रहेका अध्यक्ष ओली र उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यबीच दोहारी चलेको छ। ओलीले एमालेको वडा देखि स्थानीय तह हुँदै केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म तय भएकाले अब पार्टी अधिवेशनहरुमा होमिएको बताएका थिए ।
तर शाक्यले ओलीको बोली काट्दै तल्ला कमिटिका अधिवेशन सदिवेशन गर्न हतार गर्न नहुने बताएकी थिइन् । आज नेकपा एमाले वाग्मती प्रदेश कमिटिको अधिवेशन आयोजक कमिटिको प्रथम पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओली र शाक्यको बोली बाझीएको हो ।
बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्रीसमेत रहेकी उपाध्यक्ष शाक्यले पार्टीको वडा अधिवेशन हतारमा गरिहालौं भन्ने पक्षमा आफू नरहेको अडानसमेत राखेकी छन्। बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एमाले बागमती प्रदेश अधिवेशन आयोजक कमिटीको प्रथम बैठकमा उनले वडा अधिवेशन हतारमा गरिहालौं र जोसुकै नेतृत्वमा आए पनि हुन्छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको बताइन्।
एमालेले पार्टीको वडा तथा पालिका अधिवेशन देशभर एकैदिन गर्ने गरी निर्देशन जारी गरिसकेको बेला उपाध्यक्ष शाक्यले हतार गर्ने पक्षमा आफू नरहेको प्रतिक्रिया दिएकी हुन्। उनले आफूले पार्टीभित्र समूहगत स्वार्थ छिराउन नचाहेको पनि पटकपटक दोहोर्‍याइन्।
अब ६ गतेदेखि वडा तहमा एकैचोटी अधिवेशन, पालिकाहरुको अधिवेशन भन्ने कुराहरु निर्देशनमा आइसकेको छ। सम्पूर्ण कमरेडहरु त्यसका लागि तयार हुनै पर्दछ।
त्यतिमात्र होइन वडा कमिटीको अधिवेशन, पालिकाको अधिवेशन भनेको केन्द्रीय कमिटीको महाधिवेशनभन्दा पनि महत्वपूर्ण छ भन्ने मैले ठानेको छु। किनभन्दा खेरी यो हाम्रो आधार हो, हाम्रो धरातल हो।
वडा अधिवेशन भनेको हाम्रो टेक्ने धरातल हो। हाम्रो पाइला कस्तो ठाउँमा राख्ने ? कहाँ राख्दाखेरी बलियो हुन्छ रु भन्ने कुराहरु सोच्ने बेला आएको छ’ उपाध्यक्ष शाक्यले भनिन, ‘त्यसैले पालिका र वडा अधिवेशन यो सामान्य हो, केही पनि होइन र ?
हतारहतारमा गरिहालौं, जोसुकै नेतृत्वमा आए पनि हुन्छ भन्ने पक्षमा म चाहिँ छैन किनभने यो हाम्रो टेक्ने धरातल भएको हुनाले यहाँ समूहगत स्वार्थ छिर्न दिनुहुँदैन। मैले समूहगत स्वार्थ भनिराखेको छु। पार्टीभित्र यो पनि हावी भएको छ।
समूहगत स्वार्थ छिर्न दिनु हुँदैन। व्यक्तिगत स्वार्थ छिराउनु हुँदैन। आफ्नो पारिवारिक स्वार्थदेखि अनेकौं स्वार्थहरु हावी भइराखेको छ। यसो हुने हो भने पार्टीको वडा तह बलियो हुन सक्दैन। सुदृढ हुन सक्दैन।’
उपाध्यक्ष शाक्यले पार्टीलाई गुटमुक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्न र सिंगो नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न पनि एमाले गुटमुक्त हुनुपर्ने उनको तर्क थियो।
यसैगरि, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आजको भाषणले सोही पार्टीका उपाध्यक्ष भीम रावल भड्किएका छन् । रावलले ओलीलाई फर्काएको जवाफी ट्वीटले राजनीति तरंगित बनेको हो । रावलले १० बुँदे सहमति ‘एकतारे’ नभइ पार्टी एकता बचाएर देशहितको लागि बजाइएको ११ तारे विगुल भएको बताएका छन्।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले बागमती प्रदेश अधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ‘१० बुँदेको सन्दर्भलाई एकतारेसँग तुलना गर्दै त्यसलाई बजाउनु आवश्यक नभएकोु बताएका थिए। त्यसको प्रत्युत्तरमा उपाध्यक्ष रावलले ओलीलाई उक्त जवाफ दिएका हुन्।’
‘१० बुँदे सहमति ुएकतारेु होइन पार्टी एकता बचाएर देशहितको लागि बजाइएको ११ तारे विगुल हो। यसको धुन संस्थागत भइसकेको छ। सबैले ठण्डा दिमागले सुन्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ,’ रावलले ट्वीटरमा लेखेका छन्।
एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टी विभाजन गर्नुअघि पार्टी एकता कायम राख्न भन्दै १० बुँदे सहमति गरिएको थियो। तर, नेता नेपालले पार्टी विभाजन गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरिसकेका छन्।
नेता नेपाललाई छाडेर ओलीसँग एमालेमै फर्केका उपाध्यक्ष रावललगायत नेताहरुले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।अध्यक्ष ओली भने त्यसमा सकारात्मक देखिएका छैनन्। यहीबीचमा आज ओलीले १० बुँदे कार्यान्वयनको कुरा गर्न आवश्यक नभएका बताएका हुन्।